यी ६ कुराहरु नसिकाउने हो भने असल अभिभावक होइन, - यादका टुक्रा
यी ६ कुराहरु नसिकाउने हो भने असल अभिभावक होइन,
1 month ago 3662 Views
बच्चाका लागि आमाबुवा नै आफ्नो आदर्श हुन् । आमाबुवाले गर्ने, बोल्ने, सोच्ने सबै कुराको प्रभाव बच्चामा पर्छ । बच्चाले आमाबुवाको पदचाप पछ्याउने हो । आमाबुवाले जे गर्छन्, बच्चाले त्यसैको नक्कल गर्छन् । उनीहरु ठान्छन्, आफ्नो आमाबुवाले गरेको सबै कुरा ठीक र राम्रो छ । त्यसैले अभिभावकले उनीहरुको सामुन्ने वास्तवमै रोड मोडल बन्ने मौका प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् ।
Don't Miss it यी १० कुराहरु स्कुलमा सिक्छन् भनेर बस्नु हुन्छ भने तपाईका सन्तान अभद्र हुन्छन्
Up Next गर्भवतीले यी कुराहरु याद नगर्दा रोगी बच्चा जन्मिन सक्छ, ख्यालख्याल गर्न हुन्न
भर्खरै जन्मिएका बच्चालाई कसरी नुहाइदिने ? नजानेमा जे पनि हुन सक्छ,
चिकित्सकका अनुसार भर्खर जन्मेका शिशुलाई कम्तीमा पनि सातामा तीन पटक नुहाइदिनु पर्छ । त्यसबाहेक प्रत्येक दिन शिशुको मुख, हात खुट्टा…
1 month ago 1182 Views
बच्चालाई भान्छाको काममा लगाउदा चकित पर्ने गरिका फाइदा छन्
बच्चाले घरमा धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाउँछन् । तर, त्यसका लागि उनीहरुलाई बन्देज गर्ने होइन, बरु घरायसी काममा सरिक गराउनु…
1 month ago 408 Views
गर्भवतीले यी कुराहरु याद नगर्दा रोगी बच्चा जन्मिन सक्छ, ख्यालख्याल गर्न हुन्न
अक्सर बच्चा गर्भमा रहेको बेला आमाबुवालाई एउटा चिन्ताले सताउँछ, के हाम्रो बच्चा सकुशल जन्मिएला ? वा बच्चा शारीरिक-मानसिक रुपले स्वस्थ्य…
1 month ago 1350 Views
यी १० कुराहरु स्कुलमा सिक्छन् भनेर बस्नु हुन्छ भने तपाईका सन्तान अभद्र हुन्छन्
बच्चालाई हामी पढ्न सिकाउँछौ । लेख्न सिकाउँछौ । ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ भन्छौ । तर, उनीहरुलाई कसरी व्यवहारिक रुपमा सक्षम र…
1 month ago 1035 Views
यी १३ कुरामा केटाकेटीलाई सिकाइदिए जिन्दगीभर गर्व गर्न पाइन्छ,
बच्चालाई बच्चालाई हामी विद्यालय पठाउँछौ, पढ्नका लागि । पढ्नुको अर्थ, सिक्नु । ज्ञान आर्जन गर्नु । विद्यालयले परीक्षा लिन्छ ।…
1 month ago 2532 Views
दम्पतिका ६ किसिमहरु, यति थाहा पाए सम्बन्ध धेरै राम्रो हुन्छ
हरेक दम्प’तिमा केहि न केहि बिशेषता हुन्छन् । कसैको दाम्पत्य सुखद हुन्छन्, कसैको नाटकिय । यस्ता अनेक प्रवृत्ति हुन्छन्, दम्प’तिमा…
12 months ago 4236 Views
कर्णसँग गुपचाप प्रमे थियो कर्णको, महाभारतमै यसरी खुल्यो त्यो कुरा
द्रौपदी पाँच पान्डवकी पत्नी थिइन् । उनी आफ्ना पाँच पतिलाई एक समान प्रेम गर्दीनथीन् । उनी सबैभन्दा बढी अर्जुनलाई प्रेम…
8 months ago 372 Views